माधुरी किन नेता हुन चाहन्नन्? – The Public Today
माधुरी किन नेता हुन चाहन्नन्?
द पब्लिक टुडे चैत्र २४, २०७५ ८:५२ am
मुम्बई, चैत्र २४ – बलिउडका कतिपय कलाकारहरु चुनाव भनेपछि मरिहत्ते गर्छन्। नेता हुन दल प्रवेश गर्छन्। कुनै दल या नेतासँगको सामिप्यता प्रदर्शन गर्छन्। यो फेहरिस्तमा हिरोइनहरु पनि छन्।
हालै मात्रै उर्मिला मातोडकर, जो ९० को दशककी चर्चित अभिनेत्री हुन्, कांग्रेस पार्टी प्रवेश गरिन् र मुम्बईबाट चुनाव लड्दैछिन्। अर्की प्रख्यात अभिनेत्री माधुरी दिक्षितका हकमा पनि यस्तै अनुमान गरिएको थियो। कतिपय मिडियाले त लेखे नै, माधुरी दिक्षितले पनि अब कुनै पार्टीमा प्रवेश गरेर राजनीतिमा जाने तयारी गरिरहेका छिन्।
तर, यस्तो अनुमानमा त्यतिबेला पूर्णविराम लाग्यो, जब उनले स्पष्ट भनिन्, ‘मलाई राजनीतिमा कुनै रुची छैन। न म राजनीतिमा आउने तयारी नै गरिरहेकी छु।’
बिबिसीसँग हालै मात्र भलाकुसारी गर्दै माधुरीले भनेकी छिन्, ‘राजनीति गर्न राजनीतिक हुनुपर्छ। यसको ज्ञान चाहिन्छ। यदि तिमी राजनीति गर्न गइरहेका छौ भने यसको हेक्का हुन जरुरी छ। तर, मलाई यसको ज्ञान छैन। त्यसैले राजनीति गर्दिन।’
फिल्म अभिनेत्रीहरु धमाधम राजनीतिमा आइरहेका छन् त? के उनीहरु राजनीतिका ज्ञाता हुन्? अभिनेत्री माधुरीलाई लाग्छ, कुनै अभिनेत्रीलाई म राजनीति गर्न योग्य छु भन्ने लाग्छ भने चुनावी मैदानमा उत्रिए फरक पर्दैन। यसमा माधुरी आफूले पनि पुरा समर्थन गर्ने बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘जो मैदानमा छन् उनीहरुलाई मेरो समर्थन छ। तर, मलाई यस्तो समर्थन चाहिएको छैन। अब्बल अभिनय र कुशल नृत्यकी दोभान अर्थात् माधुरी दिक्षितलाई बलिउडमा उच्च श्रेणीको कलाकर्मी मानिन्छ। – एजेन्सी